Nkọwa:Ụgbọala na-ebugharị ụgbọala maka ụgbọala,Okwute Na-agba Ọkụ Na-adịghị Anya,Epeepe na-ekpuchi Rubber maka ụgbọala
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Ihe mkpuchi kpụkọrọ akpụkpọ silicone silicone dị arọ maka ụgbọala
Ihe Nlereanya.: SWC2505
Ụdị mkpuchi ígwè a nwere ike iji chaa chaa. Anyị bụkwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ikpu ụkwụ maka ụgbọala kemgbe afọ 2010. Ọ na-adịgide adịgide ma na-enwe mmasị na gburugburu ebe obibi, ọmarịcha ihe nkedo ụgbọ elu nwere ike ịka mma maka iji ya mee ka ụgbọ ala gị mara mma karị, n'ihi na ọ bụ 100% nri silicone. Na mkpuchi ikuku ígwè nke na-esochi ya bụ na ị na-anya ụgbọ ala, mgbe ị na-anya ụgbọ ala ahụ, ọ dị mma, na-emetụkwa ya aka. mkpuchi ikpuchi uhiere maka ụgbọ ala na -aghọwanye ndị na-ewu ewu, ọ bụghị nanị ọnụ ala dị ala, kamakwa ya na oke mma.
Igwe mkpuchi uhie ụkwụ na-acha ezigbo mma, nke dị n'ime ya dị mma, ya mere ọ ga-aka mma maka ichebe ugbo ala.
Ihe ọ bụla dị arọ bụ ihe dị ka 206g na mbukota. 100% bara uru dabara ụgbọala gị.
Agba nwere agba nkịtị, nwekwara ike inye Pantone agba. N'afọ 2018, anyị mepụtara ụfọdụ àgwà dị mma, na-ebipụta akwụkwọ mara mma na mkpuchi ụkwụ . Ya mere ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla, anyị nwere ike imere gị.
ụlọ ọrụ anyị ga-abụ SGS na ISO, anyị bụkwa ụlọ ọrụ Disney.
Nwa agbọghọ Na-eji mma mkpuchi ígwè na-ekpuchi ya Kpọtụrụ ugbu a
Ụgbọala na-ebugharị ụgbọala maka ụgbọala Okwute Na-agba Ọkụ Na-adịghị Anya Epeepe na-ekpuchi Rubber maka ụgbọala Ụgbọala na-ebugharị ụgbọala Ụgbọaka Ngwongwo ụgbọ ala na-anya ụgbọ ala Ụlọ mkpuchi ụgbọala mkpuchi ụgbọala Mkpọgharị ụgbọala ụgbọala Ford Ụgbọ ala nke na-adọgharị ụgbọala